Izinyanga Nezinkathi ZaseJalimane (Imali Yenyanga)
Bangane abathandekayo, sizobona izinsuku, izinyanga nezinkathi zaseJalimane esifundweni sethu esibizwa ngokuthi Izinyanga ZaseJalimane kanye Nezinkathi ZaseJalimane. Ngemva kokufunda isipelingi nokuphinyiselwa kwezinyanga, izinkathi zonyaka nezinsuku ngesiJalimane, sizokubonisa ikhalenda kanye Izinyanga nezinsuku zaseJalimane Sizohlola ukuthi ibhalwe kanjani ekhalendeni.
Sizoqinisekisa ukuthi isihloko siqondakala kahle futhi ngeke sikhumbuleke ngokunikeza izinto eziningi ezibonakalayo kusihloko sethu. Njengoba isihloko sezinsuku, izinyanga nezinkathi ngesiJalimane kuyindaba esetshenziswa kakhulu empilweni yansuku zonke, kuyisihloko okufanele sifundwe kahle.
Njengoba wazi, kunezinyanga eziyi-12 ngonyaka. Izinyanga zakho ngesiNgisi njengoba kushiwo Izinyanga zakho ngesiJalimane Ukubiza amagama nesipelingi kuyafana. Eqinisweni, ukufundwa nokupelwa kwezinyanga ezithile ngesiTurkey sethu kuyafana nokuphinyiselwa kanye nokubhalwa kwezinyanga zaseJalimane. Izinyanga zaseJalimaneizihloko ezinjengezinsuku, izinkathi zonyaka nokuthi sizobona ini ngokuzayo Isimo sezulu saseJalimane Njengoba izihloko ezinjengalezi ziphakathi kwezihloko ezishiwo ngezikhathi ezithile empilweni yansuku zonke. Izinyanga zaseJalimane Kuyadingeka ukuba ngekhanda kahle.
Sincoma ngokuqinile ukuthi wenze ukuhlolwa kwesihloko esincane ngaphansi kwesihloko ngemuva kokukhomba kahle izinyanga nezinkathi zaseJalimane.
Okokuqala, ake sibone amagama amagama aseJalimane etafuleni.
Khona-ke ake sinikeze kokubili isipelingi nokufunda kwezinyanga zaseJalimane ohlwini.
Bese sibone izinkathi zaseJalimane nezinsuku zaseJalimane.
Izinyanga ZaseJalimane (I-Die Monate)
Izinyanga zaseJalimane kuboniswe ngezansi njengetafula.
1 Januwari 7 UJuli
2 Februwari 8 August
3 Mashi 9 September
4 Ephreli 10 Oktober
6 Juni 12 Disemba
Manje ake sibone kokubili isipelingi nokufunda kwezinyanga zaseJalimane:
Amakhonksi aboniswa kubakaki, i: isibonakaliso sibonisa ukuthi incwadi esandulele ifundwa isikhathi eside.
NgoJanuwari: Januari (anuar)
NgoFebhuwari: Februwari (ngesiNgisi)
Mashi: März (meðts)
Ngo-Ephreli: Ngo-Ephreli (April)
Kwangathi: Mai (may)
NgoJuni: Juni (yuni)
Julayi: UJuli (yuli)
Agasti: Agasti (Agasti)
Okthoba: Oktober (okto: ba :)
Novemba: Novemba (november :)
NgoDisemba: Dezember (detsemba :)
IziNyanga zaseJalimane ezinezinombolo zezinombolo
Abangane abavelele, izifundo zesiJalimane nezincwadi zesiJalimane ukuze bafundise kokubili izinyanga nezinyanga banikezwa ngokulandelana kwenani lezinyanga.
Kule nkambo sizokwazi ukubona inani lemigqa ezinyangeni zaseJalimane:
UDeonunte Monat ngo-September
Der zehnte Monat ka Oktober
Der elfte Monat ngoNovemba
Dlulela kuyi-main menu Dlulela kuyi-menu yesibili
Njengoba wazi, kunezinkathi ezine zonyaka.. Iqiniso lokuthi kunezinkathi zonyaka ezine onyakeni liyiqiniso elamukelekayo emhlabeni wonke, nakuba kwamanye amazwe zingekho izinkathi ezine ncamashi phakathi nonyaka. Ngokwesibonelo, kwamanye amazwe omhlaba, inkathi yasebusika ingase ingabonakali ngendlela esiphila ngayo ezweni lakithi. Kwamanye amazwe, inkathi yasehlobo ayitholakali ngokugcwele. Kodwa okumele sikwazi ukuthi kunezinkathi ezi-4 ngonyaka.
manje Izinkathi zaseJalimane Masiqhubekele esihlokweni.
ngezansi Isizini ngesiJalimane Sabhala amagama abo neTurkey yabo ngaphesheya kwabo. Udinga ukuyifunda ngokucophelela futhi uyibambe ngekhanda.
ekwindla : iwe
Winter : ebusika
entwasahlobo : entwasahlobo
Sommer : I-Yaz
Iziphi izinyanga zesiJalimane okuyisikhathi sonyaka?
IZINYANGA ZAMAJalimane NEZINKATHI ZASEGERMAN
Disemba Disemba Mashi I-Mart Juni Juni September I-Eylül
Januwari Januwari Ephreli UNisan UJuli Julayi Oktober Ekim
Februwari Februwari May Mayıs August Agasti November Novemba
Etafuleni elingenhla zombili Izinkathi zaseJalimane nezinyanga eziphakathi kwalezi zikhathi ziyakhonjiswa.
Ihlobo: Sommer (zo: mır)
I-autumn: i-Herbst (i-herpst)
Ubusika: Ubusika (ukuphazamisa)
Sikhombise izinyanga zaseJalimane etafuleni elingenhla ngokusho kwezikhathi ezikuso.
UDezember, Januar, izinyanga zikaFebhuwari zitholakala ebusika.
Ngenkathi yasentwasahlobo, eza ngemuva kobusika, kunezinyanga zikaMärz, Ephreli noMai.
Izinyanga uJuni, uJuli no-Agasti zitholakala ehlobo ngemuva kwentwasahlobo.
Esikhathini sekwindla, esiza ngemuva kwenkathi yehlobo, kunezinyanga zikaSepthemba, Oktober noNovemba.
Izigwebo ezinezinyanga zaseJalimane
Manje njengoba sesifundile isihloko sezinyanga zaseJalimane, sesingenza imisho ngezinyanga zaseJalimane.
Ungabuzi umbuzo wokuthi iyiphi inyanga esiyiJalimane:
I-Welcher Monat ist heute?
(Yiphi inyanga esikuyo?)
I-Welcher Monat ist heute? (Yiphi inyanga esikuyo?)
Monat ist Oktober. (Singo-Okthoba)
I-Monat is Juni. (SingoJuni)
IMonat ingo-Ephreli. (Singo-Ephreli)
I-Monat is Mai. (SingoMeyi)
I-Monat is Januwari. (SingoJanuwari)
Bangani abathandekayo, ngemuva kokufunda izinyanga zaseJalimane, manje ake sinikeze kafushane imininingwane ngezinsuku zaseJalimane njengoba zihambisana nodaba.
Izinsuku Nezinyanga Ekhalenda LesiJalimane
Ngezansi kukhalenda lesampula elilungiselelwe isiza sethu. Izinyanga nezinsuku zaseJalimane zivame ukukhonjiswa emakhalendeni ngokulandelayo.
Izinyanga ZaseJalimane Ikhalenda Lonyaka LaseJalimane
Izinyanga zaseJalimane nezinkathi zonyaka funda isihloko sethu, uma ufisa Izinsuku zaseJalimane Ungafunda indaba yethu yokulandisa ekhasini elihlukile.
Isivivinyo Sokuhlolwa Kwezihloko ZesiJalimane Nenyanga
Sincoma ukuthi uxazulule ukuhlolwa kwezinyanga zaseJalimane esihlokweni sethu sokuhlola saseJalimane, bangane abathandekayo. Izinyanga zesiJalimane nezinkathi zesiJalimane ziyisifundo esivame ukufundiswa ebangeni lesi-9. Abafundi abangazange bathathe izifundo ezanele zesiJalimane ebangeni lesi-9 bangakwazi futhi ukubona izinyanga zesiJalimane ebangeni le-10. Ngakolunye uhlangothi, abafundi abaqala ukufunda ulimi lwangaphandle besebancane bangathatha izifundo zezinyanga zesiJalimane nezinkathi zesiJalimane ebangeni lesi-6-7 noma lesi-8.
Ungabhala noma yimiphi imibuzo nokuphawula ngezifundo zethu zaseJalimane ezinkundleni ze-almancax.
Joyina izinkundla ze-almancax ezinamalungu angaphezu kwama-35.000 abhalisiwe, futhi ujabulele ukufunda isiJalimane online ndawonye.
I-Almancax inakho konke okudingayo ukuze ufunde isiJalimane.
# Izinyanga ZaseJalimane (I-Die Monate)
# IziNyanga zaseJalimane ezinezinombolo zezinombolo
# Izikhathi ZaseJalimane
# Iziphi izinyanga zesiJalimane okuyisikhathi sonyaka?
# Izigwebo ezinezinyanga zaseJalimane
# Izinsuku zaseJalimane
# Izinsuku Nezinyanga Ekhalenda LesiJalimane
# Isivivinyo Sokuhlolwa Kwezihloko ZesiJalimane Nenyanga
Izinombolo zokubala izinombolo zesiJalimane, i-Ordinalzahlen
Ukungena kwe-Die ngesiJalimane
Imisho Yokuzikisela YesiJalimane
Tags: 10. inkulumo yesi-German yesifundo, 9. inkulumo yesi-German yesifundo, amagama enyanga yamaJerman, amagama enyanga yamaJerman, izinyanga zaseJalimane, izinyanga zaseJalimane inkulumo, amagama asezinkathini zaseJerman, amagama asezinkathini zaseJerman, izinkathi zaseJalimane, izinyanga ngesiJalimane, izinkathi zaseJalimane, izinyanga zesi-German, isi-German ezinyangeni, izinkathi zaseJalimane